China Korea- KC Inkonzo kunye noVavanyo |MCM
Ukususela kwi-25thAug., 2008，Korea Ministry of Knowledge Economy (MKE) wabhengeza ukuba National Standard Committee uya kuqhuba isiqinisekiso olutsha uphawu lwesizwe oludityanisiweyo -- ebizwa KC uphawu endaweni Certification Korean ngexesha phakathi Jul. 2009 kunye Dec. 2010. Ukhuseleko Izixhobo zoMbane. iskimu soqinisekiso (iSiqinisekiso se-KC) siskimu esisisinyanzelo nesizilawulayo sokuqinisekisa ukhuseleko ngokuhambelana noMthetho woLawulo loKhuseleko lweZixhobo zoMbane, inkqubo eqinisekise ukhuseleko lokwenziwa nokuthengiswa.
Umahluko phakathi kokuqinisekiswa okunyanzelekileyo kunye nokuzilawula(ngokuzithandela)isiqinisekiso sokhuseleko:
Kulawulo olukhuselekileyo lwezixhobo zombane, isatifikethi se-KC sahlulwe ngokweziqinisekiso zokhuseleko ezinyanzelekileyo kunye nezizilawulayo (ngokuzithandela) njengokwahlulwa kwengozi yemveliso.Izifundo zesiqinisekiso esisiSinyanzeliso sisetyenziswa kwizixhobo zombane apho izakhiwo kunye neendlela zosetyenziso ezinokuthi zibangele. iziphumo eziyingozi ezinzulu okanye umqobo onjengomlilo, ukutshatyalaliswa kombane.Ngelixa izifundo zokuzilawula (ngokuzithandela) isiqinisekiso sokhuseleko sisetyenziswa kwizixhobo zombane apho izakhiwo zayo kunye neendlela zokusetyenziswa zingenako ukubangela iziphumo ezinobungozi okanye umqobo onjengomlilo, ukutshitshiswa kombane.Kwaye ingozi kunye nomqobo unokuthintelwa ngokuvavanya izixhobo zombane.
▍ Ngubani onokufaka isicelo sesiqinisekiso se-KC:
Bonke abantu abasemthethweni okanye abantu abasekhaya nakwamanye amazwe ababandakanyeka kwimveliso, ukudibanisa, ukusetyenzwa kwesixhobo sombane.
▍Iskimu kunye nendlela yokuqinisekisa ukhuseleko:
Faka isicelo sesatifikethi se-KC ngemodeli yemveliso enokwahlulwa ibe yimodeli esisiseko kunye nemodeli yothotho.
Ukuze ucacise uhlobo lwemodeli kunye noyilo lwezixhobo zombane, igama elilodwa lemveliso liya kunikwa ngokwemisebenzi yalo eyahlukileyo.
▍ Isiqinisekiso se-KC sebhetri yeLithium
KC isiqinisekiso umgangatho ibhetri lithium:KC62133: 2019
Umda wemveliso yesiqinisekiso se-KC sebhetri ye-lithium
A. Iibhetri ze-lithium yesibini zokusetyenziswa kwisicelo esiphathwayo okanye izixhobo ezisuswayo
B. Iseli ayixhomekekanga kwisatifikethi se-KC nokuba siyathengiswa okanye sidityaniswe kwiibhetri.
C. Kuba iibhetri ezisetyenziswa kwisixhobo sogcino lwamandla okanye i-UPS (unikezelo lwamandla olungaphazamisekiyo), kunye namandla abo angaphezu kwama-500Wh angaphaya komda.
D. Ibhetri enomthamo wamandla omthamo ungaphantsi kwe 400Wh/L ingena kumda wesatifikethi ukusukela ngo-1.st, Epreli 2016.
● I-MCM igcina intsebenziswano esondeleyo kunye neelebhu zaseKorea, ezifana ne-KTR (i-Korea Testing & Research Institute) kwaye iyakwazi ukunika izisombululo ezingcono kakhulu kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu kunye nenkonzo yeXabiso elongezelelweyo kubaxhasi ukusuka kwinqanaba lokukhokela, inkqubo yokuvavanya, isiqinisekiso. iindleko.
● Isiqinisekiso se-KC sebhetri ye-lithium egcwalisekayo sinokufunyanwa ngokungenisa isatifikethi se-CB kwaye sisiguqulele kwisatifikethi se-KC.Njenge-CBTL phantsi kwe-TÜV Rheinland, i-MCM inokubonelela ngeengxelo kunye nezatifikethi ezinokuthi zifake isicelo sokuguqulwa kwesatifikethi se-KC ngokuthe ngqo.Kwaye ixesha elikhokelayo linokufinyezwa ukuba usebenzisa i-CB kunye ne-KC ngaxeshanye.Ngaphezu koko, ixabiso elinxulumeneyo liya kuba lihle ngakumbi.
Ngaphambili: Japan- PSE
Isatifikethi sebhetri yaseKorea
Isatifikethi se-Kc 62133
Isiqinisekiso se-Kc 62133
Ixabiso leSiqinisekiso se-Kc 62133
Kc 62133 Inkqubo yeSiqinisekiso
Inkonzo yeSiqinisekiso se-Kc 62133
Kc 62133 Ixesha lokukhokela
Kc 62133 Ucaphulo
Kc 62133 Uvavanyo
Kc 62133 Uvavanyo Ixabiso
Inkonzo yoVavanyo lwe-Kc 62133
Kc 62133 Ixesha loVavanyo
Ixabiso leSiqinisekiso saseKorea
Inkqubo yeSiqinisekiso saseKorea
Inkonzo yeSiqinisekiso saseKorea